के हो पेरिटोनाइटिस ? - Sunkesari
के हो पेरिटोनाइटिस ?
November 26, 2019 sunkesari News
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई बिहान ९ बजे मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा भर्ना गरियो । परीक्षणपछि डाक्टरहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एपेन्डिसाइटिससहित पेरिटोनाइटिस भएको निष्कर्ष निकाले ।
तत्काल विज्ञ चिकित्सकहरुको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीको लेपेरेटोमी र एपेन्डेक्टोमी गर्‍यो । एपेन्डेक्टोमी भनेको एपेन्डिक्स हटाउने सामान्य शल्यक्रिया हो । एपेन्डिसाइटिस भएपछि एपेन्डेक्टोमी शल्यक्रिया गरेर उपचार गरिन्छ ।
यस्तै, लेपेरोटोमी भनेको पेट चिरेर समस्या पत्ता लगाउने वा शल्यक्रियाको तयारी गर्ने प्रक्रिया हो । पहिलो चरणमा एपेन्डेक्टोमी गरेर एपेन्डिसाइटिसको उपचार गरिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई पेरिटोनाइटिस पनि देखिएकाले लेपेरोटोमी पनि गरिएको हो । हाल उनको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ ।
पेरिटोनाइटिस भनेको पेटमा हुने पेरिटोनियम तन्तु सुन्निएर हुने इन्फेक्सन हो । पेरिटोनियमले पेटमा हुने आन्द्रालगायत विभिन्न अंगलाई छोप्ने र अड्याउने काम गर्छ । पेरिटोनियममा ब्याक्टेरिया वा ढुसी (फंगाइ)ले इन्फेक्सन गराएपछि पेरिटोनाइटिस हुन्छ ।
समयमै उपचार गरेको खण्डमा पेरिटोनाइटिस सहजै ठीक हुन्छ । तर, यसको उपचार भएन भने यो रगत हुँदै द्रुत गतिमा अन्य अंगमा पनि सर्छ । जुनजुन अंगमा पेरिटोनाइटिस सर्छ ती अंगले काम गर्न छाड्छन (मल्टिपल अर्गान फेइलर) र बिरामीको मृत्यु हुन सक्छ ।
सामान्यतय भोक नलाग्ने, रिंगटा लाग्ने र हल्का दुखिरहेको पेट एक्कासि क्षणभरमै सहनै नसकिने गरि दुख्न थाल्नु पेरिटोनाइटिसका लक्षण हुन् । पेरिटोनाइटिसले पेट दुख्दा हलचल गर्न पनि असहज हुने गर्छ ।
पेरिटोनाइटिस दुई प्रकारका हुन्छन्, प्राइमरी पेरिटोनाइटिस र सेकेन्डरी पेरिटोनाइटिस । प्राइमरी पेरिटोनाइटिस भनेको सिधै पेरिटोनियममा इन्फेक्सन हुनु हो भने पेटका अन्य अंगमा इन्फेक्सन हुँदा त्यसका जिवाणुहरू पेरिटोनियमसम्म पुगेर त्यहाँ इन्फेक्सन हुनु सेकेन्डरी पेरिटोनाइटिस हो ।
दुवै प्रकारका पेरिटोनाइटिस घातक हुन्छन् । यदि पेरिटोनाइटिससँगै सिरोसिस पनि भएको अवस्थामा ४० प्रतिशत बिरामीको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । यस्तै, सेकेन्डरी पेरिटोनाइटिस भएका १० प्रतिशत बिरामीको मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।
प्रधानमन्त्रीमा देखिएको पेरिटोनाइटिस उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलाइसिसका कारण भएको हुनसक्छ । डायलाइसिस र मिर्गौला प्रत्यारोपण प्राइमरी पेरिटोनाइटिसको मुख्य कारणमध्येमा पर्छ भने यस्ता विरामीलाई यो घातक पनि हुन्छ ।
मिर्गौलाले काम नगर्ने व्यक्तिको रगतमा भएका विकार बाहिर निकाल्न ‘क्याथेटर’ शरिरमा राखिन्छ । ‘क्याथेटर’ भनेको विकार बाहिर निकाल्न पेरिटोनियममा राखिने एक प्रकारको नली हो ।
क्याथेटर पेरिटोनियममा राखेपछि इन्फेक्सन हुने खतरा बढ्छ । क्याथेटरले पेरिटोनियमलाई कन्टामिनेट (दूषित) बनाउन सक्ने भएकाले इन्फेक्सनको खतरा बढेको हो ।
तर, आईसीयूमा उपचाररत रहेकाले प्रधानमन्त्रीको हकमा यो रोग धेरै घातक नहुन सक्छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले पनि उनको अवस्था स्थिर रहेको बताइरहेका छन् । यद्यपि, केही समययता निरन्तर डायलाइसिस गरिरहने तथा भर्खरै एपेन्डेक्टोमी पनि गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पेरिटोनाइटिस घातक पनि हुन सक्छ ।
६२ दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिका बलात्कृत
कास्की २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विद्या भट्टराई निर्वाचित